စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် တရုတ် 1kw အိတ်ဆောင် Photovoltaic ဆိုလာစနစ် ထုတ်လုပ်သူ - Zhechi Electric
နောက်ဆုံးရောင်းချနေသည့် 1kw အိတ်ဆောင် Photovoltaic ဆိုလာစနစ်သည် အခမဲ့နမူနာကို ပေးပါသည်။
1kw အိတ်ဆောင် Photovoltaic ဆိုလာစနစ်၏ လုပ်ဆောင်ချက်
ဆိုလာပြားသည် အဓိကအစိတ်အပိုင်းသာမက ဆိုလာပါဝါစနစ်တွင် တန်ဖိုးအရှိဆုံး အစိတ်အပိုင်းလည်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်မှာ နေ၏ တောက်ပသော စွမ်းအင်ကို DC ပါဝါအဖြစ် ပြောင်းလဲရန် ဖြစ်သည်။
PV Controller ဟုလည်းလူသိများသော ဆိုလာအားသွင်းထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် ပါဝါချိန်ညှိခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် ဘက်ထရီအားသွင်းခြင်းအား အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဆားကစ်ပြတ်တောက်ခြင်း၊ ဝန်ပိုခြင်း၊ ချိတ်ဆက်မှုကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း၊ အားပိုလျှံခြင်း၊ အားကုန်လွန်ခြင်းစသဖြင့် အလုံးစုံကာကွယ်မှုပေးပါသည်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် အပူချိန်လျော်ကြေးပေးသည့်လုပ်ဆောင်ချက်လည်း ရှိသင့်သည်။
3. သိုလှောင်မှု ဘက်ထရီ
ဘက်ထရီဘဏ်၏ အဓိကတာဝန်မှာ ဆိုလာပြားများမှ မတည်မငြိမ်ဖြစ်သော DC ပါဝါကို သိုလှောင်ရန်နှင့် အင်ဗာတာသို့ တည်ငြိမ်သော DC ပါဝါကို ပေးဆောင်ရန်နှင့် ညဘက်နှင့် မိုးရွာသောနေ့များတွင် ဝန်များ တည်ငြိမ်စွာလည်ပတ်နိုင်စေရန်ဖြစ်သည်။
4. ကေဘယ်လ်များနှင့် MC4 ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်အစိတ်အပိုင်းများချိတ်ဆက်မှုအတွက် အထူး 4mm2 PV ဝါယာကြိုးများ၊ ဘက်ထရီကြိုးများနှင့် MC4 ချိတ်ဆက်ကိရိယာများကို ရွေးချယ်ပါသည်။
5. Off-Grid Pure Sine Wave အင်ဗာတာ
Off-grid အင်ဗာတာသည် off -grid ဆိုလာစွမ်းအင်စနစ်၏ ပင်မအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်မှာ ဘက်ထရီဘဏ်မှ တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်းအား သယ်ဆောင်အသုံးပြုရန်အတွက် လျှပ်စီးကြောင်းအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏ရေရှည်တည်ငြိမ်စွာလည်ပတ်မှုကိုသေချာစေရန် photovoltaic ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုစနစ်၏အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန်အတွက် အင်ဗာတာစွမ်းဆောင်ရည်သည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
hot Tags:: 1kw အိတ်ဆောင် Photovoltaic ဆိုလာစနစ်၊ တရုတ်၊ စျေးသက်သာသော၊ လျှော့စျေး၊ နောက်ဆုံးရောင်းချမှု၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စတော့တွင်၊ အခမဲ့နမူနာ၊ စျေးနှုန်း၊ ကိုးကားချက်၊ အာမခံ ၂ နှစ်